Nilaza ny iPhone fa 'Mety tsy ho tohanana ity fitaovana ity.' Ity ny The Fix! - Iphone
ny ipad tsy handray andraikitra
amin'ny & t fanavaozana ny toe-javatra fitaterana
maninona no ambany ny volume ao amin'ny iphone-ko
iphone 5c mitady tambajotra
tsipika fotsy amin'ny efijery iphone 5
Milaza ny iPhone fa “Mety tsy ho tohanana ity fitaovana ity.” Ity ny The Fix!
Niditra tao amin'ny iPhone-nao ianao mba handefasana azy io, saingy misy zavatra tsy mandeha tsara. Tsy nijanona intsony ny famandrihana ary nisy pop-up mahaliana niseho teo amin'ny efijery - ny iPhone-nao dia milaza fa 'Ity fitaovana ity dia mety tsy tohanana. ”Amin'ity lahatsoratra ity dia hazavaiko ny antony ahitanao ity hafatra ity amin'ny iPhone anao ary asehoko anao ny zavatra azonao atao hamahana ny olana.
paoma niraikitra tamin'ny fanavaozana
Fa maninona ny iPhone no miteny hoe 'Mety tsy ho tohanana io fitaovana io'?
Nilaza ny iPhoneo hoe 'Mety tsy ho tohanana ity fitaovana ity' satria nisy ny tsy nety rehefa nanandrana nametaka fanampin-tsolika tao amin'ny seranan-tsambon'i Lightning iPhone ianao. Karazan-javatra samihafa no mety miteraka olana:
Ny fitaovana ampiasainao dia tsy voamarina amin'ny MFi.
Tsy mandeha amin'ny laoniny ny rindrambaiko iPhone.
Maloto, simba, na tapaka tanteraka ny fitaovana ampiasainao.
Maloto, simba, na simba tanteraka ny seranan-tsambonao iPhone Lightning.
Maloto, simba, na vaky tanteraka ny charger anao.
Ny dingana etsy ambany dia hanampy anao hamantatra sy hanamboatra ny tena antony mahatonga ny iPhone milaza hoe 'Mety tsy tohanana ity fitaovana ity.'
Andramo ny mampifandray ilay fitaovana indray
Ny zavatra voalohany tokony hatao rehefa milaza ny iPhoneo hoe 'Mety tsy ekena io fitaovana io' dia manandrama mampifandray azy indray. Tsindrio ny handroaka bokotra ary esory avy eo ivelan'ny seranan-jiro an'ny iPhone ny fampiasainao. Atsofohy ao anaty raha hijery raha toa ka miseho ilay pop-up mitovy.
Voamarina ve ny accessory MFi anao?
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny pop-up 'Mety tsy ho tohanana ity' ity dia mipoitra fotoana fohy aorian'ny fampidiranao ny iPhone ho loharano herinaratra hitakiana azy. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny tariby mamandrika izay ezahanao hofehezina ny iPhone-nao dia tsy voamarina MFi, midika izany fa tsy natao mifanaraka amin'ny fenitry ny famolavolana Apple.
Ireo tariby manafatra azonao vidiana amin'ny tobin-tsolika na fivarotana dolara eo an-toerana dia saika tsy voamarina amin'ny MFi satria mora vidy tokoa. Amin'ny tranga sasany, ireo tariby ireo dia mety hiteraka fahasimbana lehibe amin'ny iPhone amin'ny alalàn'ny overheating azy io .
Raha azo atao dia ampidiro amin'ny tariby izay niaraka taminy ny iPhone. Raha toa ka tsy mandeha ny tariby manafatra miaraka amin'ny iPhone dia azonao atao ny manova azy amin'ny iray vaovao ao amin'ny Apple Store anao, raha mbola rakotry ny drafitra AppleCare ny iPhone-nao.
Mety milaza ilay iPhoneo hoe 'Mety tsy ho tohanana io fitaovana io' noho ny famelezan'ny rindrambaiko madinidinika. Rehefa mampiditra fitaovana fanampiny ao amin'ny port Lightning an'ny iPhoneo ianao, ny iPhone-nao rindrambaiko mamaritra hoe raha hifandray amin'ilay fitaovana fanampiny na tsia.
Miezaha hamerina ny iPhone, izay indraindray afaka mamaha olana rindrambaiko madinidinika. Raha manana iPhone 8 na taloha ianao, tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra , avy eo swipe ny kisary herinaratra ankavia miankavanana amin'ny fampisehoana. Ny fizotrany dia mitovy amin'ny iPhone X, XS, ary XR, afa-tsy ianao tsindrio ary tazomy ny bokotra Side ary koa ny bokotra volume mandra- solafaka hiala amin'ny herinaratra miseho.
Andraso 15-30 segondra, avy eo avereno jerena ny iPhone amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fihazonana ny bokotra herinaratra (iPhone 8 sy aloha) na ny bokotra Side (iPhone X sy ny vaovao kokoa). Raha vantany vao miverina ny iPhone-nao dia manandrama mampifandray amin'ny kojakojainao indray.
Raha mandeha io dia nisy glitch lozisialy nahatonga ny olana! Raha mbola mahita ny pop-up amin'ny iPhone-nao ianao dia mandrosoa amin'ny dingana manaraka.
Diniho ny momba anao
Ankehitriny rehefa nofongaranao ny mety hisian'ny tariby mametra izay tsy voamarina amin'ny MFi sy olan'ny rindrambaiko madinidinika dia tonga ny fotoana hijerena ireo fitaovana fanampiny. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny kojakoja ezahinao hampiasaina rehefa mahita ny 'Mety tsy ho tohanana ity fitaovana ity.' pop-up dia tariby mamaly.
Na izany aza, misy fitaovana na kojakoja mampiditra ao amin'ny seranan-tsambon'ny Jiro an'ny iPhone mety hipoitra ny fanairana. Topazo maso ny faran'ny mpampifandray Tselatra (ny ampahan'ny fampiasa izay miditra ao amin'ny seranan-jiro misy ny iPhone) ny kojakoja ezahinao hampiasaina.
Misy fiolahana na fanodinkodinana ve? Raha izany dia mety manana olana ny mampifandray anao amin'ny iPhone-nao. Ity no tranga vao tsy ela akory izay ho ahy, satria nisy fahasimbana tamin'ny tariby nampandeha ahy ka nahatonga ny iPhone hahazo ilay “Mety tsy ho tohanana ity fitaovana ity.” pop-up, na dia azoko tamin'ny Apple aza ny tariby.
Ny fihanaky ny rano dia mety hanimba ny mpampifandray amin'ny Lightning amin'ny kojakoja misy anao koa raha vao nandany zava-pisotro ianao, dia mety ho izany no tsy mandeha.
Raha ny tariby fampihenanao no fitaovana manampy anao izay mahatonga ny olana dia jereo ihany koa ny faran'ny USB. Misy loto, lint, na potipoti-javatra hafa mihitsoka ao amin'ny faran'ny USB? Raha izany dia diovy amin'ny alàlan'ny borosy anti-static na borosy nify tsy ampiasaina. Raha tsy manana borosy anti-static ianao dia afaka mahita a enina fonosana tsara amin'ny Amazon.
Topazo maso ao anatin'ny seranan-tsambonao
Raha toa ka milamina ny endrik'izy ireo dia jereo ao anatin'ny port Lightning amin'ny iPhone-nao. Izay basy, loto, na potipoti-javatra mety hanakana ny iPhone tsy hanao fifandraisana madio amin'ny fitaovanao. Raha ny fampandrenesana 'Mety tsy ho tohanana ity' ity dia mikatona eo amin'ny efijery na tsy horoahina, dia io matetika no olana.
Makà jiro jiro ary jereo akaiky ao amin'ny seranan-tsambon'i iPhone's Lightning. Raha mahita zavatra tsy an'ny ao anatin'ny seranan-jiro ianao, andramo diovina izany.
Ahoana no fanadiovako ny seranan-tsampin'ny iPhone?
Raiso an borosy anti-statika na borosy nify vaovao ary esory izay manakana ny seranan-tsambon'ny iPhone's Lightning. Mety ho gaga ianao amin'ny ohatrinona mivoaka!
Vantany vao nodiovinao izany dia andramo ampidiro indray ny fitaovana ampiasainao. Mandrosoa amin'ny dingana manaraka raha toa ka mbola miteny ny iPhone hoe 'Mety tsy tohanana ity fitaovana ity.'
Diniho ny charger an'ny iPhone
Raha milaza ny iPhoneo hoe 'Mety tsy ho tohanana ity fitaovana ity' rehefa manandrana mandoa azy ianao dia mety hisy koa ny olana amin'ny charger iPhone anao fa tsy ny tariby Lightning. Topazo maso akaiky ao amin'ny seranan-tsambo USB amin'ny charger iPhone-nao. Toy ny tamin'ny dingana teo aloha, dia ampiasao borosy anti-static na borosy nify vaovao hanadiovana ny basy, lint, na potipoti-javatra hafa.
Hamarino tsara fa manandrana mamaky ny iPhone amin'ny charger maro samihafa koa ianao. Raha manana olana amin'ny famandrihana iray fotsiny ny iPhone-nao dia azo inoana fa ny charger anao no miteraka ny olana.
Raha mahita hatrany ny pop-up 'Mety tsy ho tohanana ity fitaovana ity' na inona na inona charger ampiasainao, dia tsy ny charger-nao no olana.
Ny kojakoja sasany (indrindra ireo namboarin'i Apple) dia mitaky kinova iOS iray apetraka amin'ny iPhone alohan'ny ahafahan'izy ireo mifandray. Mandeha Fikirana -> Ankapobeny -> Fanavaozana ny lozisialy ary tap Sintomy sy apetraka raha misy fanavaozana rindrambaiko misy. Zahao ny lahatsoratray raha manana ianao olana amin'ny fanavaozana ny iPhone .
Alohan'ny hametrahanao ny fanavaozana, alao antoka fa ny iPhone dia mamaly na manana bateria 50% farafaharatsiny. Rehefa manomboka ny fametrahana azy dia ho faty ny iPhone-nao ary hisy bara fisehoana hiseho eo amin'ny fisehoana. Rehefa feno ny bara, vita ny fanavaozana ary hiverina tsy ho ela ny iPhone-nao.
Manaova DFU Averina amin'ny iPhone
Na dia tsy azo inoana aza, misy vintana kely misy olana amin'ny rindrambaiko lalindalina kokoa mahatonga ny iPhone hiteny hoe 'Mety tsy ho tohanana ity fitaovana ity.' Amin'ny fanatanterahana famerenana amin'ny laoniny DFU, azontsika atao ny manafoana io olana rindrambaiko lalina io amin'ny famafana azy tanteraka amin'ny iPhone.
mpanangona nofinofy mainty sy fotsy
Rehefa manao DFU famerenana amin'ny laoniny ianao, ny code rehetra amin'ny iPhone dia voafafa ary naverina niverina tany amin'ny iPhone. Raha mila fitsangatsanganana an-tongotra feno, jereo ny torolàlana amin'ny fanatanterahana famerenana DFU amin'ny iPhone !
Raha toa ka mbola miteny ny iPhoneo hoe 'Mety tsy ho tohanana ity fitaovana ity' aorian'ny nanarahana ny dingana rehetra etsy ambony dia mety mila soloina ny kojakoja na hanamboarana ny iPhone. Araka ny efa noresahiko teo aloha tamin'ity lahatsoratra ity dia azonao atao ny mahazo ny tariby mitondra ny lozisialy sy ny charger rindrina miaraka amin'ny iPhone nosoloina raha toa ka voasaron'ny AppleCare ny iPhone-nao.
Azo atao ihany koa fa ny seranan-tsambo iPhone Lightning anao dia simba na simba ary tsy maintsy amboarina. Raha rakotry ny AppleCare ny iPhone-nao, mandamina fotoana amin'ny Apple Store akaikinao ary asaivo mijery ny teknolojia. Manoro hevitra ihany koa izahay an serivisy fanamboarana an-tsitrapo antsoina hoe Puls , izay mandefa teknisianina voamarina ho anao izay hanamboatra ny iPhone eo an-toerana.
Eto izahay raha mila fanohanana
Miasa ny fitaovana ampiasainao ary mandeha ara-dalàna indray ny iPhone-nao. Ho fantatrao tsara izay hatao amin'ny manaraka raha milaza ny iPhone hoe 'Mety tsy ekena io fitaovana io.' Aza misalasala mamela fanontaniana hafa ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany!